Ady seza eo amin’ireo mpitokona : Mikatso ny fandrafetana ny governemanta -
AccueilSongandinaAdy seza eo amin’ireo mpitokona : Mikatso ny fandrafetana ny governemanta
09/06/2018 admintriatra Songandina 0
Misedra fahasahiranana ny praiminisitra Ntsay Christian eo amin’ny fananganana ny governemanta vaovao noho ny afitsok’ireo mpitolona etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Nivadika tamin’ireo sendika nataony fitaovana nanamaro sy nanamaro isa azy teny an-kianja mantsy ireto depiote milaza fa ho an’ny “fanovana”. Tany am-boalohany, dia nanome toky ireto mpikatroka sendikaly ireo depiote fa tsy hamitaka azy ireo rehefa tratra ny tanjon’ny tolona fa samy ahazo ny anjarany avokoa ny rehetra eo amin’ny fametrahana fiovana amin’ny fitantanana ny firenena. Ankehitriny anefa dia nivadika ireto depiote ireto, satria tsy araka ny niheverana azy ny vokatry ny fitokonana. Tsy tratra araka izay nantenaina mantsy ny tanjona. Fanonganam-panjakana no nantenaina, kinanjo fandravana governemanta no azo. Izany hoe vitsy izany ireo seza azo zaraina. Voafetra ihany mantsy ny isan’ireo toerana minisitra azo ampidirina handrafitra ny governemanta Ntsay Christian. Rehefa izay, dia nilaza ireto depiote miisa 73 fa izy ireo aloha no tokony hatao laharam-pahamehana amin’ny fandrafetana ny governemanta vaovao, ka araka ny fanapahana navoakan’ny HCC farany teo, sy ny didy navoakan’ny CES taorian’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, dia ny Mapar no tokony ho maro an’isa ao anatin’ny governemanta, manaraka azy ao ny Tim, izay vao manaraka ireo antoko madinika amin’ny isan’ny seza. Nomena lamosina sy nanaovana be marenina tampoka teo araka izany ireo mpikatroka sendikaly.
Nahatsapa izay fanilikilihina izay ireto mpikatroka sendikaly ireto, ka mampiaka-peo amin’izao fotoana izao. Hentitra ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) tamin’ny fanambarana nataony, fa tsy mila minisitra efa namela sary ratsy teo anivon’io minisitera io. Izany hoe tsy ho tafaverina ho minisitry ny Fitsarana intsony i Christine Razanamahasoa , izay miketrika mafy ny hiverina eo amin’io toerana io. Niaraha-nahalala mantsy ny zava-bitany teo anivon’ity minisitera ity fony izy minisitra tao tamin’ny andron’ny Tetezamita, ary saika nahazo fanakianana sy tsikera tamin’ireo mpisehatra teo amin’ny tontolon’ny fitsarana ny tenany tamin’izany fotoana izany. Toa izany ihany koa ny sendika eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, sy ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, izay efa nampitandrina ireto depiote miisa 73 ireto fa hanamafy ny fitokonany, raha toa ka tsy araka izay nifanarahana teny an-kianja ny olona hotendrena ho minisitra eny amin’ireo minisitera ireo. Mipoitra avokoa ankoatra izay ireo sendika eny anivon’ireo minisitera hafa, ary samy mametra fepetra ny amin’izay olona tokony hotendrena ho minisitr’izy ireo. Anisan’ny takian’ireto sendika ireto ny amin’ny hoe tokony ho minisitra teknisiana, no handrafitra ny governemanta vaovao. Eo no mitranga ny olana, nilaza ny tsy hanaiky lembenana mihitsy mantsy ireto mpikatroka sendikaly ireto raha toa ka tsy mifanaraka amin’ny eritreritr’izy ireo ireo olona handrafitra ny governemanta vaovao. Sahirana araka izany ireto depiote miisa 73 izay efa nisora-tena fa tompon-draharaha amin’ny fanendrena ireo olona hatao minisitra ao anatin’ny governemantan’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Raha ny fantatra, dia izy ireo mihitsy ankehitriny no mampitarazoka ny fananganana ity governemanta ity. Tsy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina araka izay resaka alefa izany no sakana mampikatso ny firenena ankehitriny.
﻿우리카지노 dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
Taip: Just what I wwas searching for, appreciate it for posting. http://seo-services.biz.plxn.wo.lt/redirect.php?url=http://clubstoreexp.com/forum/index.php%3Faction=profile;u=35312